Waxbarasho cusub oo warshada ah oo dugsiga sare lagu dhigi doono - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Waxbarasho cusub oo warshada ah oo dugsiga sare lagu dhigi doono
La daabacay måndag 12 augusti 2013 kl 11.59
Jan Björklund hogaamiyaha xisbiga Folkpartiet ahna wasiirka tacliinta ayaa shaaca maanta ka qaadey in meesha laga saarayo barnaamijka dugsiga sare gymnasiet lagu dhigto ee warsahadaha isla markaan la hirgelinayo barnaamijk cusub oo ah waxbarshada warshadaha.
Ardeyda hada dhigata barnaamijkan ayaa loo ogaalaan doonaa in ay dhameystaan barnaamijkooda.
Wasiirka oo sharaxayey sababta ayaa yeri sida tan.
- Iswedhen waa dal warshadeed waxaana dooneynaa in ay sii ahaato dal warshadeed , xataa hadii shaqooyink warshadaha hada yaraadeen . warshada weli muhiimad weyn ayey dalkan ka leeyahiin waxaana u baahanahey dad badan oo warshada ka shaqeeya, ayuu ka yeri wasiirka shir saxafadeed uu maanta qabtey.
Barnaamijkan cusub ee wasiirka ku dhawaaqey ayaa qayb ka noqon doona barnaamijka farsamada ee lagu dhigto dugsiga sare ee gymnasiet.
sannadnooyinkan danbe waxaa aad isku dhimey ardeyda dalbata waxbarashada warshadaha ee dugsiga sare. Sidaas darted ayey hada dowladda dooneysaa in ay hirgeliso barnaamij cusub oo waxbarasho farsamada ah. Hayadda Iskulka Skoverket ayaa loo gacan geliyey in ay jan goyso qorshaha barnaamijkan cusub.
Barnaamijkan cusub waxuu sidoo kale ka micno noqon doona in ardeyga asaga go'aansado in waxbaarsahdiisa ahaato mid uu ku soo geli karo jamacada iyo in ay ahaato keliya mid xirfaded.